युगसम्बाद साप्ताहिक - सीमा अतिक्रमण : सबैले देख्ने, सरकारले नदेख्ने
Thursday, 04.09.2020, 10:08pm (GMT+5.5) Home Contact
सीमा अतिक्रमण : सबैले देख्ने, सरकारले नदेख्ने
Tuesday, 01.30.2018, 02:57pm (GMT+5.5)
काठमाडौं । नेपालको दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतले पटकपटक नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दैआएको छ । पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भारतले छिल्लो समय नयाँ सीमा स्तम्भ राख्ने नाममा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको छपकैयामा ५० विघा नेपाली भूमि मिचेको आम संचारमा तथ्यसहति बाहिर आए पनि सरकार मौन रहेका बेला दुई विद्यार्थी संगठनले भारतले नेपाली भूमि मिचेको तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् । नापी विभागले नेपाली भूमि नमिचिएको र तथ्यका आधारमा सीमा स्तम्भ गाँडिएको बताए पनि अध्ययनले भने त्यसको ठीक विपरीत देखायो ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु (कान्तिक्रारी)ले स्थलगत अध्ययन गरी नेपाली भुभाग भारतले मिचेको तथ्यसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइ । सो प्रतिवेदनमा जंगेपिलर ३९१, ३९२ र ३९३ सम्मको करिब ४ किलोमिटर क्षेत्रमा ५० विघाभन्दा बढी नेपाली भूमी भारतले अतिक्रमण गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारी पक्षले एक इन्च सीमा नमिचिएको दाबी गरिरहेको अवस्थामा विद्यार्थी संगठनले तथ्यसहित नेपाली भूमी मिचिएको प्रतिवेदन तयार परेर प्रधामन्त्रीलाई बुझाएका हुन् । स्थानीयवासीले फुटबल, क्रिकेट खेल्ने मैदानसमेत मिचेर भारततर्फ परेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ– “जग्गाधनी पूर्जा, नागरिकताको प्रमाण पत्रलगायतका प्रमाणित तथ्यका आधारमा नेपाली भूमी भारतमा परेको स्पष्ट हुन्छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं १, छपकैयामा नेपाली जनताले वर्षौंदेखि हकभोग गरी आएको, नेपाल सरकारले दिएको लालपूर्जा र तिरो तिरेको रसिदसमेत भएको कैयौँ विघा नेपाली भूमी भारततिर पर्ने गरी नयाँ नयाँ सीमा स्तम्भ गाड्न सुरु गरेको छ ।”
नयाँ सीमा स्तम्भ राख्ने क्रममा “नेपालले बिजोडी र भारतले जोडी मुख्य स्तम्भ (जंगे पिलर) बनाउने सहमति भए पनि भारतले मुख्य स्तम्भ नबनाएर सहायक स्तम्भ बनाउन काम गरेको छ । नेपालले मुख्य स्तम्भ ३९१ बनाइसकेको छ तर भारतले ३९२ नम्बरको स्तम्भ नबनाई सहायक स्तम्भ बनाइरहेको छ । नेपाल भारतको सीमानामा ९१६ मुख्य स्थल र ८५५३ सहायक स्तम्भ छन् । भारतले बनाउने भनेको ३९२ नम्बरको मुख्य स्तम्भको ६ नम्बर सहायक स्तम्भ स्थानीयवासी रविन्द्र महतोको कित्ता नम्बर १४ को जग्गामा पर्न गएको छ । भारतले बनाएको पिलरले सिर्सिया नदीपारी रहेको कित्ता नम्बर १, २ र ३ लाई झनै रातारात भारतीय भूमीको रूपमा कायम गरिएको” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अध्ययनमा जुटेको अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रन्जित तामाङले नेपाल पक्षको लापरवाहीले नेपाली भूमी भारतमा परेको बताउँदै सीमाना निर्धारणको तयार पारिएको ‘स्ट्रिप म्याप’ नै गतल रहेका बताउनुहुन्छ । अध्यक्ष तामाङका अनुसार स्थानियको लालपुर्जा, तिरो तिरेको रसिद, उनीहरुले लगाएका बोटविरुवा लगायत कारणले नेपाली भुमी भारतमा परेको पाइएको छ । उता दजगजालाई समेत भारतले उपयोग गरिरहेको पाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आश्चर्यको कुरा त के छ भने दसगजा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले दसगजाको नियमलाई लत्याउँदै सरकारी भवन निर्माण गरेको छ । स्तम्भ गाड्ने सन्दर्भमा नेपाली भूमी मिचिएपछि स्थानीय नेपालीले अवरोध गर्दा भारतीय एसएसबी हतियारसहित आएर नेपालीमाथि अत्याचार गर्ने गरेको स्थानीयको भनाइलाई उधृत गर्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अनुसन्धानपछि नेपाल भारतको संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटीसी) ले सीमा व्यवस्थापनको लागि बनाएको ‘स्ट्रिप म्याप’को पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग विद्यार्थी संगठनको रहेको छ । ‘स्ट्रिप म्याप’ को कारण नै भारतले नेपाली सीमा मिच्ने काम गरिरहेको विद्यार्थी संगठनको निष्कर्ष छ । ‘स्ट्रिप म्याप’ पुनरावलोकन गर्दा पुरानो मुख्य (जंगे पिलर), ऐतिहासिक मान्यता र स्थानीयवासीको भोगचलनलगायत प्रमाणलाई आधार बनाएर अगाडि बढाउन माग गरिएको छ ।
सुगौली सन्धिताकाको नदी सिमानालाई मुख्य आधार मानेर बनाइएको भनिएको ’स्ट्रिप म्याप’ पनि नेपाल पक्षसँग चुकेको अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष तामाङ बताउनुहुन्छ । प्रतिवेदनमा ‘स्ट्रिप म्याप’ तयार गर्दा सिमा क्षेत्रको कतिपय ऐतिहासिक पक्षलाई रिफ्रेन्सको रूपमा नलिनु समस्याको कारण भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– “३९२ मुख्य स्तम्भलाई उत्तर बनाउदै करिब १०० मिटर पूर्व गएर नेपाली भूभागतिर बहने गरेको सिर्सिया नदी र त्यही खण्डमा हिन्दू धर्मवलम्बीले उत्तरायण नुहाउने गरेको ऐतिहासिक मान्यता थियो र केही वर्ष अगावैको बाढीले धार परिवर्तन गर्दा नदी पारी गएको नेपाली भूमीलाई पारी नै छोडिदिने गरी सिमाङ्कन भएको पाइयो ।”
नेपाली टोलीको निरीहता एवं भारतीय पक्षको योजना मुताविक सिमांकन कार्य बढेको पाइएको छ । सीमा नदी तटबन्धनमा पनि भारतीय पक्ष बलियो ठहरिनु र फलस्वरूप नेपाली भूमि कटान नरोकिनुको साटो बढ्दै जानुले पनि नेपाली भूमी मिचिनुमा सहायक भूमिका खेलेको देखिन्छ । तटबन्धनको लागि आएको बजेट पनि कागजमै तयार गरेर खाने र भारतीय पक्षलाई रिझाउने सँस्कृतिका कारण भारतलाई नेपाली भुमी अतिक्रमण गर्न सजिलो भएको प्रतिवदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
भारतले दशक अघि नै नेपाल र भारतबीच ९८ प्रतिशत सीमा विवाद समाधान भएको भन्दै नक्सा तयार पारेर नेपाललाई हस्ताक्षरका लागि दवाव दिंदै आएको छ । उसले सुस्ता र कालापानी बाहेक अन्यत्र समस्या नभएको बताए पनि नयाँ सीमा स्तम्भ राख्ने क्रममै नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्न थालेको छ ।
लामो समयदेखि सुस्ताको १६ हजार हेक्टरमध्ये १४ हजार हेक्टर भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको छ । कालापानी नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय सीमामा पर्दछ । कालापानी नेपाल, चीन र भारतका लागि सामरिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ । त्यहाँ भारतले सैन्य क्याम्प नै राखेको छ । केही वर्षअघि त भारत र चीन दुबैले यो क्षेत्रलाई दुई देशको व्यापारीक केन्द्र बनाउने सम्झौता नै गरे । यसपछि कालापानी त नेपालको हातबाट फुत्कने चिन्ता जाहेर भएको छ । भारतले नेपालको २३ जिल्लामा झण्डै ६५ हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । यसमध्ये कालापानीमा ३७ हजार र सुस्तामा १४ हजार हेक्टर भूमि पनि पर्दछ ।
आफ्नो भूमि अतिक्रमणमा परेपछि स्थानीयबासी आक्रोशित छन् । उनीहरुले यसको बिरोध गरिरहेका छन् । आश्चर्यको कुरा के हो भने– मधेशवादी भनेर चिनिने र मधेशको हितका लागि राजनीति गरेको भन्ने मधेशवादीदेखि भोलि सरकार बनाउन तयार भएर बसेका र अन्य कुनै पनि दलले यस विषयमा मुख खोलेका छैनन् ।
सरकार मौन रहे पनि सरकार नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले यो घटनाको विरोध गर्दै घटनास्थलको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको छ । कांग्रेसको युवा पुस्ताका नेता धनराज गुरुङ लगायतका नेताले पनि स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको छ । सरकारमा बस्नेले जतिसुकै भारतको तावेदारी गरे पनि बाहिरका नेता तथा भातृ संगठनहरुमा भने राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा उनीहरु पार्टीको धारभन्दा बाहिर रहेका छन् ।
त्यस्तै छपकैयामा पुगेर माओवादी भातृ संगठन वाईसीएलले भारतले सीमा मिचेको भनिएको स्थानमा माघ ९गते राष्ट्रिय झन्डा गाडेको थियो । आफ्नो भूमी रक्षाका लागि आफूहरु वाईसीएल केन्द्रीय समितिले सीमामा राष्ट्रिय झन्डा गाडेको ध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले बताए । उनीहरुले सीमा मिचिएका जग्गाधनी रवीन्द्र महतोलाई साथमा लिएर वाईसीएलले झण्डा गाडेका हुन् ।
शहीदको भण्डार बन्दै देश (01.30.2018)
आर्थिक संकट आउनसक्ने चेतावनी (01.30.2018)
दुराशयपूर्ण भित्री खेल रोकिएको छैन : राष्ट्रियसभा र प्रदेश सरकारतिर ध्यान केन्द्रित (01.25.2018)
प्रदेश प्रणालीको अभ्यास शुरु, राजधानीको विवादले उग्ररुप (01.25.2018)
गम्भीर रोगका औषधिको मूल्यमा मनोमानी (01.25.2018)
वाम सरकारको बाटो छेक्ने प्रयास जारी (01.09.2018)
प्रदेश राजधानीको ववण्डर (01.09.2018)
राष्ट्रियसभामा बाम गठबन्धनको ४३ सिट (01.09.2018)
भाइरलका बिरामीलाई धामीझाँक्री, नौजनाको ज्यान गयो, पुगेनन् स्वास्थ्यकर्मी (01.09.2018)
सरकार गठनमा नियोजित बिलम्ब : बहुमतको सरकार बन्न नदिन ठूलो चलखेल (01.02.2018)
राजनीतिक विवादको गाँठो फुक्यो तर अलमल कायमै (01.02.2018)
गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्रमा सरकार (01.02.2018)
सरकार गठन प्रक्रिया अबरुद्ध ! (12.26.2017)
पार्टी एकीकरण नभए स्थायित्व असम्भव (12.26.2017)
राष्ट्रियसभा गठनमा दलीय रोदन (12.26.2017)
अस्थिरताका जडहरु पाखा लागे (12.19.2017)
ताजा जनादेशको अवमूल्यन गर्ने धृष्टता (12.19.2017)
स्वार्थको परिणाम भोग्यो राप्रपाले (12.19.2017)
गुरुकुल जोगाउन अभियान (12.19.2017)
भारतभक्तिले कांग्रेसलाई डुबायो ! वाम दललाई देश जोगाउने र बनाउने ठूलो अवसर (12.12.2017)